Proverb 440 Andevolahy tsy mahatra-drasa : miapoka ery atsimom- patana. [Veyrières 1913 #533]
Proverb 1382 Aza miisa roa ohatra ny Tankady . [Rinara 1974 #776]
Proverb 2147 Foy ho atsimon- trano, ka tsy foy ho andrefan-trano . [Veyrières 1913 #2854]
Proverb 3729 Mandry atsimon' ny maty . [Veyrières 1913 #2522]
Proverb 4199 Miisa roa ohatra ny fatin-jaza , sady ao atsimon- trano no am--pasan- -drazana . [Rinara 1974]
Proverb 5591 Ny toerana no tsy lavorary dia ny trano atsimo sy avaratra no mifanaraby . [Rinara 1974 #3300]
Proverb 7353 Trano atsimo sy avaratra: izay tsy mahalena ialofana . [Cousins 1871 #3266]
Proverb 7525 Tsy mahalala atsimo sy avaratra intsony. [Veyrières 1913 #2828]